Ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay diyaarad Ruushka lahaa oo lagu soo riday gudaha Suuriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan shan qof oo ku dhimatay diyaarad Ruushka lahaa oo lagu soo riday gudaha Suuriya
August 1, 2016 Abdi Omar Bile World 0
Burburka diyaarada Ruushka ee dhacday oo gubanaya. Sawirka: Reuters.
Moscow-(Puntland Mirror) Shan Ruush ah ayaa ku dhimatay kadib markii diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo militariga lahaayeen ay ku burburtay waqooyiga dalka Suuriya, sida ay sheegeen Ruushka.
Diyaarada ayaa ku dhacday gobolka Idlib, waxayna siday saddex shaqaale ah iyo labo sarkaal, sida ay sheegtay wasaarada difaaca Ruushka.
Diyaarada ayaa kasoo noqotay marka ay dhacday gaarsiin caawimaad insaanimo oo ay geysay deegaan u dhow magaalada Aleppo, sida Ruushka sheegay.
Ma cadda kooxda soo riday diyaarada, balse gobolka ay diyaarada ku dhacday waxaa ku xoog badan kooxaha mucaaradka ee isbahaysiga ah oo ay kamidyihiin kooxaha jihaadiyiinta ah.
Shilka ayaa noqonaya kii ugu weynaa oo hal mar ay ku dhintaan dad intaas gaaraya oo Ruush ah tan iyo markii Ruushka ay bilaabeen bishii September ee sanadkii hore faragalintooda gudaha dalka Suuriya oo ay ku taageerayaan dowlada Madaxweyne Bashar al-Assad.
Dhimashada maanta ka dhalatay diyaarada la soo riday ayaa ka dhigaysa 18 tirada guud ee Ruushka looga dilay gudaha Suuriya.
September 18, 2016 Ugu yaraan 62 askari oo Suuriyaan ah oo ku dhintay duqaymo diyaaradeed oo loo malaynayo in ay qaadeen Xulufada Maraykanka uu hoggaaminayo